နှလုံးသားဖြင့်ရင်းသော......: Naples သို့အလည်တစ်ခေါက်...
ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကအီတလီနိုင်ငံရဲ့တောင်ပိုင်းမှာတည်ရှိတဲ့ naples, pompeii, sorrento နဲ့ capri ကိုခရီးတိုလေးထွက်ဖြစ်ခဲ့တယ်။ ခရီးထွက်တာနှစ်ရက်တည်းရယ်ပါ (ကြာသပတေး၊သောကြာ)။
ဒါပေမယ့်လဲ တစ်ရက်နဲ့တစ်ပုိုင်းဘဲပျော်ခဲ့လိုက်ရတယ်။ မသွားခင်နှစ်ရက်လောက်အလိုကလဲ အအေးမိနှာစေးပြီးအစာအိမ်မကောင်းတာနဲ့ ခရီးတောင်ထွက်ဖြစ်ပါ့မလားလို့တွေးမိသေးတယ်။ တော်သေးပါရဲ့ သက်သာသွားတာနဲ့ ကုိုယ်လဲသူငယ်ချင်းမပါဘဲ တိုးရစ်အဖွဲ့နဲ့ခရီးစတင်လိုက်တယ်။ ခရီးစဉ်ကမနက်စောစောဆိုတော့ သီချင်းလေးနားထောင်ရင်း လမ်းမှာအိပ်မယ်လို့စိတ်ကူးထားတာ ရှုမဆုံးတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကသဘာဝအလှတရားက ဆွဲဆောင်လွန်းအားကြီးတော့ တရေးလောက်မှေးဖို့တောင်သတိမရလိုက်မိပါဘူး။ မနက်ဝေလီဝေလင်းဆိုတော့မြူတွေဆိုင်းလို့ အဝေးပြေးလမ်းမကြီးရဲ့ တဖက်တချက်မှာတော့သစ်ပင်တွေ တောင်တန်းတွေက မှုံပြပြနဲ့ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ တောင်တန်းတွေရဲ့နောက်ကွယ်ကနေ မြင့်တက်လာတဲ့ရောင်နီရဲ့အလှကလဲတုနိုင်းစရာကင်းမဲ့လောက်အောင်.....
ပြီးတော့ တချို့တချို့နေရာတွေမှာအသီးအရွက်စိုက်ခင်းတွေ ပန်းမျိုးစုံစိုက်တဲ့ Green house တွေ ချောင်းငယ်တံတားငယ်တွေနဲ့ အို... တကယ်ပါ စကားလုံးတွေနဲ့ဖော်မပြတတ်လောက်အောင်ပါဘဲ အရမ်းကုိုလှပလွန်းတယ်။ တစ်နာခွဲကျော်ကျော်လောက်ခရီးနှင်ပြီးတဲ့အခါမှာတော့ မနက်စာစားဖို့ခရီးတထောက်နားပြီး နောက်ထပ်တစ်နာရီလောက်ဆက်မောင်းတော့ naples မြို့ကိုရောက်ပါတယ်။
Castel Nuovo ( New Castle )
Royal Palace နဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်က naples မြို့ရဲ့ အကြီးဆုံးပြည်သူ့ရင်ပြင်ပါ။
naples မှာ နာရီဝက် မိနစ်လေးဆယ်လောက်လည်ပတ်ပြီးတော့ နေ့လည်စာသွားစားကြပါတယ်။
နေ့လည်စာစားပြီးတဲ့အခါမှာတော့ AD 79 ရာစုနှစ်လောက်က Vesuvius မီးတောင်ရဲ့ဖျက်ဆီးခြင်းခံလိုက်ရတဲ့ Pompeii မြို့ကိုခရီးဆက်ကြပါတယ်။
Pompeii ကနေ Sorrento ကိုညအိပ်ဖုို့ရန် မိနစ်လေးဆယ်ခန့်ခရီးထပ်ဆက်ရပြန်ပါတယ်။
အသွားလမ်းမှာ ညနေစောင်းရာကနေတဖြည်းဖြည်းမှောင်လာပြီမို့ တောင်တန်းတွေရဲ့တောင်ခြေမှာ ပြိုးပြိုးပြက်ပြက်ရောင်စုံမီးရောင်တွေနဲ့ ကျန်ခဲ့တဲ့ naples မြို့ရဲ့အလှက ပင်လယ်ပြင်နဲ့ယှဉ်တွဲထားတာလဲအတော့်ကို လွမ်းမောဖွယ်ရာကောင်းလှပါတယ်။ ကားပေါ်မှာဆိုတော့ ဓာတ်ပုံလဲမရိုက်ဖြစ်လိုက်ပါဘူး။
အဲ့ဒီလိုနဲ့ဘဲ ညရဲ့အလှအပကိုငေးမောရင်း တစ်ညတာတည်းခိုဖို့ရန် ဟိုတယ်ကိုရောက်ခဲ့ပါတယ်။
ကိုယ့် Blog ဆီလာလည်ကြတဲ့ မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းများအားလုံး သာယာပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့တဲ့ ဒီဇင်ဘာကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းရင်း... ကျေးဇူးတင်လျှက်....
နောက်တနေ့မှာရောက်ခဲ့တဲ့ အရမ်းကိုသာယာလှပတဲ့ Capri ကျွန်းခရီးစဉ်ကို ဆက်ရန်....
CellMoe Thursday, December 01, 2011
rose Thursday, December 01, 2011
Take good care of your health, sis! Italy is amazingly beautiful. Thanks for sharing.
Candy Friday, December 02, 2011
ကျန်းမာရေး ဂရုစိုက်ပါနော် မမ..
ဆက်ရန်ကို မျှော်နေပါသည်. :D
ဓာတ်ပုံလေးတွေ ကြည့်ပြီး သွားတောင်သွားချင်လာတယ်ဗျာ။
ပုံလေးတွေက လှလိုက်တာ..ရိုက်သူတော်လို့ဖြစ်မယ်.. :D
jasmine(တောင်ကြီး) Sunday, December 04, 2011
Merry X'mas 2